Isimida dhaqanka gobolka Bari oo xal ka gaaray dagaalkii u dhexeeyay Puntland iyo DPG. | XAL DOON
Home NEWS Isimida dhaqanka gobolka Bari oo xal ka gaaray dagaalkii u dhexeeyay Puntland...
Isimida dhaqanka gobolka Bari oo xal ka gaaray dagaalkii u dhexeeyay Puntland iyo DPG.
Isimada dhaqanka gobolka Bari ayaa ku guuleystay iney xal ka gaaraan xiisad mudooyinkii u danbeeyay ka taagneyd magaalada Boosaaso, taasoo u dhexeysay maamulka Puntland iyo madaxda PDG.
Sida wararku sheegayaan, Odayaashan ayaa ku qanciyay Ciidamadii ka yimid dhanka degmada Carmo iney dib Boosaaso uga laabtaan, iyadoo Ciidankan oo isugu jiray kuwo ka tirsan Daraawiishta Puntland iyo Maleeshiyaad uu watay Ciise Yulux oo hore uga mid ahaa Hoggaamiyayaasha ugu sareysay Burcad Badeeda Soomaalida.
Maanta oo Sabti ah ayaa la filayaa in Odayaasha dhaqanka ay Boosaaso ka galbiyaan Ciidankan, iyagoo ka cabsi qaba in hadii ay kaligood diraan ay isku dhacaan Ciidamada kale ee Puntland ee ku sugan wadada xiriirisa Boosaaso iyo Carmo.
Dagaalka 13-kii bishan Boosaaso ka dhacay waxaa ku naf waayay hal askari oo ka tirsan Ciidamada Puntland ee Kontrolka Boosaaso ku sugnaa, halka ay ku dhaawacmeen labo kale, dagaalka waxa uu ka danbeeyay markii Ciidankan uu watay Ciise Yulux loo diiday iney galaan xarunta ganacsiga Puntland.
Si kastaba, Arrintan ayaa meesha ka saaraysa cabsi laga qabay dagaal ka dhaca magaalada Boosaaso oo maalmihii ugu dambeeyey ku qulqulayeen ciidamo.